Mitemo Yebasa - Runhare Spy
June 11, 2012 Jeff - Mumiriri weKutsigira kwehunyanzvi 2 Comments rules
Aya anotevera mamiriro uye mamiriro anotonga kushandiswa kwese kweponesspy.com webhusaiti nezvose zvirimo, masevhisi uye zvigadzirwa zvinowanikwa kana kana kuburikidza newebhusaiti (yakatorwa pamwechete, iyo Webhusaiti). Iyo Webhusaiti ndeyavo uye inoshandiswa neFoni Spy ("Mafoni Spy"). Iyo Webhusaiti inopihwa zvichienderana nekutambira kwako pasina kushandurwa kwezvese zvirevo uye mamiriro ari mune ino uye mimwe mimwe mitemo yekushanda, marongero (kusanganisira, pasina muganho, Nhare dzeSpy zvakavanzika Policy) nemaitiro anogona kuburitswa nguva nenguva pane ino Saiti. nePhones Spy (pamwe chete, iyo "Chibvumirano").
Ndokumbirawo kuti muverenge Chibvumirano ichi mushe musati mawana kana kushandisa iyo Webhusaiti. Nekuwana kana kushandisa chero chikamu chewebhu webhusaiti, unobvuma kusungwa nemitemo nemamiriro echibvumirano ichi. Kana iwe usingabvumirani kune ese mazwi uye mamiriro echibvumirano ichi, saka haugone kuwana iyo Webhusaiti kana kushandisa chero masevhisi. Kana aya mazwi uye mamiriro akaonekwa seanopihwa nePhones Spy, kugamuchirwa kuri pachena kune aya mazwi. Iyo Webhusaiti inowanikwa chete kune vanhu vane angangoita 18 makore ekuberekwa.
Yako phonesspy.com Akaunti uye Saiti. Kana iwe ukagadzira blog / saiti paWebhusaiti, iwe une basa rekuchengetedza kuchengetedzeka kweaccount yako uye blog, uye iwe unonyatso tarisa zviitiko zvese zvinoitika pasi peaccount uye chero zviito zvakatorwa maererano neblog. Iwe haufanire kutsanangura kana kupa mazwi akakosha kublog rako nenzira inotsausa kana isiri pamutemo, kusanganisira nenzira inotarisirwa kutengesa pazita kana mukurumbira wevamwe, uye Nhare Spy dzinogona kuchinja kana kubvisa chero tsananguro kana kiyi kiyi iyo yainofunga seisina kukodzera kana isiri pamutemo, kana neimwe nzira ingangoita kuti Phones Spy mutoro. Iwe unofanirwa kuzivisa pakarepo Mafoni Spy nezve chero kushandiswa kusingatenderwe kweblog yako, account yako kana kumwe kutyora kwekuchengeteka. Nhare dzeSpy hadzizovi nemhosva kune chero zviito kana kusiiwa neMuri, kusanganisira chero kukuvadzwa kwerudzi rupi nerupi rwakakonzerwa nekuda kwezviito zvakadaro kana kusiiwa.
Mutoro weVatengi. Kana iwe ukashanda blog, taura pane blog, post zvinyorwa kuWebhusaiti, post zvinongedzo paWebhusaiti, kana neimwe nzira kugadzira (kana kubvumidza chero wechitatu bato kuti agadzire) zvinhu zvinowanikwa kuburikidza neWebhusaiti (chero zvakadai zvinhu, "Zvemukati" ), Iwe ndiwe unonyatso kukonzera zvirimo, uye chero kukuvara kunokonzerwa ne, izvo zvirimo. Ndozvazviri zvisinei nekuti zvirimo mubvunzo ndezvemavara, girafu, faira reodhiyo, kana software yekombuta. Nekuita Zvemukati kuwanikwa, iwe unomiririra uye waranti kuti:
kurodha pasi, kuteedzera uye kushandisa kweMukati hakuzokanganisa kodzero dzekuchengeta, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa kukopi, patent, chiratidzo kana kodzero dzekuvanzika dzekutengesa, chero wechitatu bato;
kana waunoshandira aine kodzero yezvinhu zvehungwaru zvaunogadzira, iwe unogona (i) kugamuchira mvumo kubva kune waunoshandira kutumira kana kuita kuti zvirimo zviwanikwe, kusanganisira asi kwete kune chero software, kana (ii) kuchengetedzwa kubva kune waunoshandira kuregererwa nezve kodzero dzose mukati kana kune Zvemukati;
iwe wakateerana zvizere nechero rechitatu-bato marezinesi ane chekuita neChirimo, uye waita zvinhu zvese zvakakosha kuti ubudirire kupfuura nekugumisa vashandisi chero anodiwa mazwi;
zvirimo hazvina kana kuisa chero hutachiona, honye, ​​malware, Trojan mabhiza kana zvimwe zvinokuvadza kana zvinoparadza zvirimo;
zvirimo hazvisi spam, hazvisi zvemuchina- kana zvakasarudzika-zvakagadzirwa, uye haina zvinehunhu kana zvisingadiwe zvemabhizimusi zvemukati zvakagadzirirwa kutyaira traffic kunzvimbo dzechitatu bato kana kusimudzira nzvimbo dzekutsvaga injini dzemasite echitatu, kana kuwedzera zviito zvisiri pamutemo (zvakadai se phishing) kana kutsausa vanogamuchira nezve sosi yezvinhu (senge spoofing);
zvirimo hazvisi zvekuona zvinonyadzisira, hazvina kutyisidzira kana kukurudzira mhirizhonga kune vanhu kana masangano, uye hazvityori zvakavanzika kana kodzero dzekushambadzira dzemumwe munhu wechitatu;
bhurogi rako harisi kushambadzwa kuburikidza nemeseji isingadiwe yemagetsi senge spam zvinongedzo mumapoka enhau, zvinyorwa zveemail, mamwe mablog uye mawebhusaiti, uye nzira dzakangofanana dzekusimudzira;
blog yako haina kutumidzwa nenzira inotsausa vaverengi vako kuti vafunge kuti uri mumwe munhu kana kambani. Semuenzaniso, yako blog blog kana zita harisi iro zita remumwe munhu asiri iwe kana kambani isiri yako; uye
iwe une, mune Zvemukati izvo zvinosanganisira komputa kodhi, zvakanyatsorongwa uye / kana kutsanangura mhando, hunhu, mashandisiro uye mhedzisiro yezvinhu, kunyangwe uchikumbirwa kuti udaro nePhone Spy kana neimwe nzira.
Nekuendesa zvirimo kumaPhones Spy kuti zviiswe paWebhusaiti yako, iwe unopa Phones Spy nyika-yepasirese, yemubhadharo-yemahara, uye isiri-yakasarudzika rezinesi rekuberekesa, kugadzirisa, kugadzirisa uye kutsikisa zvirimo chete nechinangwa chekuratidzira, kugovera uye kusimudzira yako blog. Kana iwe ukadzima Zvemukati, Nhare Spy dzinoshandisa zvine mutsindo kuedza kuzvibvisa paWebhusaiti, asi iwe unobvuma kuti caching kana mareferenzi eZvirimo zvinogona kunge zvisingaitwe nekukasira kuwanikwa.
Pasina kudzikisira chero emamwe mamiririri kana mawaranti, Nhare Spy ine kodzero (kunyange isiri chisungo) kuti, mukufunga kweFoni Spy chete (i) kuramba kana kubvisa chero chinhu icho, mumaonero eShoni Spy, chinotyora chero Phones Spy mutemo kana iri mune chero nzira inokuvadza kana isingafadzi, kana (ii) kumisa kana kuramba kuwana uye kushandiswa kweWebhusaiti kune chero munhu kana chinzvimbo chero chikonzero, mukufunga kweFoni Spy chete. Nhare dzeSpy dzinenge dzisingasungirwe kupa kudzoserwa kwechero mari yambobhadharwa kare.
Kubhadhara uye Kuvandudzwa.
Nokusarudza chigadzirwa kana sevhisi, unobvuma kubhadhara Nhare Spy iyo imwe-nguva uye / kana yemwedzi kana yegore yemari yekunyorera yakaratidzwa (mamwe mazwi ekubhadhara anogona kuverengerwa mune kumwe kutaurirana). Kubhadhara kunyoreswa kuchabhadharwa pane pre-pay hwaro pazuva raunosaina kuti Uvandudze uye ichavhara kushandiswa kweiyo sevhisi kwemwedzi kana yegore kunyoreswa nguva sekuratidzwa. Kubhadhara hakuna kudzoserwa.
Kunze kwekunge iwe wazivisa Mafoni Spy nguva isati yapera yekunyorera nguva iyo iwe yaunoda kudzima kunyoreswa, kunyorera kwako kunozozvimisikidza uye iwe unotipa mvumo yekutora iyo-inoshanda-yegore kana yemwedzi yekubhadhara mari yekunyorera kwakadai (pamwe nemitero ) uchishandisa chero kiredhiti kadhi kana imwe nzira yekubhadhara yatinayo pane yako. Kukwidziridzwa kunogona kukanzurwa chero nguva nekutumira chikumbiro chako kuPhone Spy mukunyora.
Mari; Payment. Nekusainira account yeSevhisi iwe unobvuma kubhadhara Phones Spy iyo inoshanda yekumisikidza fizi uye inodzokororwa mari. Mari dzinobhadharwa dzinozopihwa invoice kutanga kubva pazuva iro masevhisi ako akasimbiswa uye pamberi pekushandisa masevhisi akadaro. Nhare Spy dzinochengetera kodzero yekuchinja mazwi ekubhadhara uye mubhadharo pamazuva makumi matatu (30) mazuva pamberi pekuziviswa kwakanyorwa kwauri. Masevhisi anogona kukanzurwa newe chero nguva chero makumi matatu (30) mazuva akanyorwa chiziviso kuPhones Spy.
Support. Kana sevhisi yako ichisanganisira kuwana kwekutanga kutsigirwa neemail. "Tsigiro yeemail" zvinoreva kugona kukumbira rubatsiro rwehunyanzvi neemail chero nguva (nekuedza kwakaringana nePhone Spy kupindura mukati mezuva rimwe bhizinesi) maererano nekushandiswa kweVIP Services. "Kukoshesa" zvinoreva kuti rutsigiro runotora pekutanga pane rutsigiro rwevashandisi veyakajairwa kana mahara phonesspy.com masevhisi. Rutsigiro rwese rwuchapihwa zvinoenderana nePhones Spy zvakajairwa masevhisi maitiro, maitiro uye marongero.
Mutoro weWebh Visitors. Nhare Spy haina kuongorora, uye haigone kuongorora, zvese izvo zvinyorwa, kusanganisira komputa software, yakatumirwa kuWebhusaiti, uye haikwanise kuve nemhosva yezvinhu zvemukati izvo, mashandisiro kana mhedzisiro. Nekushandisa iyo Webhusaiti, Phones Spy haimiriri kana kureva kuti inotsigira izvo zvakatumirwa ipapo, kana kuti inotenda kuti zvinhu zvakadaro ndezvechokwadi, zvinobatsira kana zvisina kukuvadza. Iwe une basa rekutora matanho ekudzivirira kuti uzvidzivirire pamwe necomputer system yako kubva kuhutachiona, honye, ​​Trojan mabhiza, nezvimwe zvinokuvadza kana zvinoparadza. Iyo Webhusaiti inogona kunge iine zvirimo zvinosemesa, zvisina hunhu, kana zvimwe zvinopesana, pamwe nezviri mukati zvine zvakasarudzika zvehunyanzvi, typographical zvikanganiso, uye zvimwe zvikanganiso. Iyo Webhusaiti inogona zvakare kunge iine zvinhu zvinokanganisa zvakavanzika kana kodzero yekushambadzira, kana kukanganisa kodzero yehungwaru uye dzimwe kodzero dzekodzero, dzevamwe mapato, kana kurodha pasi, kuteedzera kana kushandisa izvo zvinoenderana nemimwe mirau nemamiriro, zvakataurwa kana zvisina kutaurwa. Nhare Spy dzinorega chero mutoro wekukuvara kupi nekupi kunobva mukushandiswa nevashanyi veWebhusaiti, kana kubva kune chero kurodha pasi nevaya vashanyi vezvakanyorwa ipapo.
Zviripo Zvakatumirwa pane Dzimwe Websites. Hatina kuongorora, uye hatigoni kuongorora, zvese zvinhu, kusanganisira software yekombuta, zvakaitwa kuti zviwanikwe kuburikidza nemawebhusaiti nemapeji ewebhu anobatanidzwa nephonesspy.com, uye iyo link kune phonesspy.com. Nhare dzeSpy hadzina masimba pamusoro peavo vasiri-Mafoni Spy mawebhusaiti uye mapeji ewebhu, uye haina mhosva kune zvirimo kana mashandisiro avo. Nekubatanidza kune isiri-Phoni Spy webhusaiti kana peji rewebhu, Nhare Spy haimiriri kana kureva kuti inotsigira webhusaiti yakadaro kana peji rewebhu. Iwe une basa rekutora matanho ekudzivirira kuti uzvidzivirire pamwe necomputer system yako kubva kuhutachiona, honye, ​​Trojan mabhiza, nezvimwe zvinokuvadza kana zvinoparadza. Nhare Spy dzinorega chero mutoro wekukuvara kupi nekupi kunobva mukushandisa kwako asiri-Mafoni Spy mawebhusaiti uye mapeji ewebhu.
Copyright Infringement neDMCA Policy. SeMafoni Spy anobvunza vamwe kuti varemekedze kodzero dzayo dzepfuma, inoremekedza kodzero dzevamwe dzevamwe. Kana iwe uchidavira kuti izvo zvinyorwa zvinowanikwa kana zvakabatanidzwa nephonesspy.com zvinotyora kodzero yako, unokurudzirwa kuzivisa Phones Spy maererano nePhones Spy's Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Mutemo. Nhare dzeSpy dzichapindura kune zvese zviziviso, kusanganisira sezvinodiwa kana zvakakodzera nekubvisa zvinhu zvinokanganisa kana kuremadza zvese zvinongedzo kune izvo zvinokanganisa zvinhu. Nhare Spy dzinogumisa kupinda kwemushanyi nekushandisa iyo Webhusaiti kana, pasi pemamiriro ezvinhu akakodzera, mushanyi akatsunga kuve anodzokorora kutyora kodzero dzekopiriti kana dzimwe kodzero dzepfuma dzePhone Spy kana vamwe. Muchiitiko chekumiswa kwakadai, Nhare Spy hazvingasungirwe kupa kudzoserwa kwechero mari yakambobhadharwa kuPhone Spy.
Intellectual Property. Chibvumirano ichi hachichinje kubva kuPhones Spy kuenda kwauri chero maFoni Spy kana echitatu bato repfuma, uye zvese zvakanaka, zita uye kufarira mukati uye kune zvakadaro zvivakwa zvinosara (sepakati pemapato) chete nePhones Spy. Nhare, Spy, phonesspy.com, iyo phonesspy.com logo, uye zvimwe zvese zviratidzo, mamaki ebasa, mifananidzo uye marogo anoshandiswa zvine chekuita nephonesspy.com, kana iyo Webhusaiti zviratidzo zvevatengesi kana zvitupa zvakanyoreswa zveMafoni Spy kana maPhones Spy vane marezinesi. Zvimwe zvikwangwani, mamaki ebasa, mifananidzo uye marogo anoshandiswa zvine chekuita neWebhusaiti iyi anogona kunge ari marondedzero evamwe mapato echitatu. Kushandisa kwako kweWebhusaiti hakukupe iwe kodzero kana rezinesi rekuberekesa kana neimwe nzira kushandisa chero Mafoni Spy kana echitatu-bato rekutengesa.
Advertisements. Nhare dzeSpy dzinochengetera kodzero yekuratidza kushambadza pa blog yako kunze kwekunge iwe watenga account-isina maakaundi.
Attribution. Nhare dzeSpy dzinochengetera kodzero yekuratidza zvinongedzo zvinongedzo senge 'Blog pa phonesspy.com,' theme theme, uye font kupiwa mune yako blog tsoka
Michina yevamwe. Nekugadzira chigadzirwa chemumwe wako (semuenzaniso dingindira) kubva kune mumwe wedu, unobvumirana nemitemo yebasa yemumwe wako. Iwe unogona kusarudza kubva pamatemu avo ebasa chero nguva nekumisikidza chigadzirwa chemumwe wako.
Domain Names. Kana iwe uchinyoresa zita rezita, uchishandisa kana kuendesa rakanyoreswa zita rezita, unobvuma uye unobvuma kuti kushandiswa kwezita remudunhu iri zvakare pasi pemitemo yeInternet Corporation yeMazita Akapihwa neNhamba ("ICANN"), kusanganisira yavo Kodzero dzeKunyoresa uye Mabasa.
Kuchinja. Nhare dzeSpy dzinochengetera kodzero, pahukama hwayo yega, kugadzirisa kana kutsiva chero chikamu chechibvumirano ichi. Ndiro basa rako kutarisa Chibvumirano ichi nguva nenguva kuitira shanduko. Kuenderera kwako kwekushandisa kana kuwana iyo Webhusaiti zvichitevera kutumirwa kweshanduko pachibvumirano ichi zvinoreva kugamuchirwa kweshanduko idzi. Nhare dzeSpy dzinogona zvakare, mune ramangwana, kupa masevhisi matsva uye / kana maficha kuburikidza neWebhusaiti (inosanganisira, kuburitswa kwemidziyo mitsva uye zviwanikwa). Aya matsva maficha uye / kana masevhisi anozoiswa pasi pemitemo nemamiriro echibvumirano ichi.
Kuguma. Nhare Spy dzinomisa kupinda kwako kune vese kana chero chikamu cheWebhusaiti chero nguva, paine kana pasina chikonzero, paine kana pasina chiziviso, zvinoshanda nekukasira. Kana iwe uchida kugumisa Chibvumirano ichi kana yako phonesspy.com account (kana iwe unayo), unogona kungorega kushandisa iyo Webhusaiti. Zvisinei nezvataurwa pamusoro apa, kana iwe uine akabhadhara account account, account yakadaro inogona kungogumiswa nePhones Spy kana iwe ukatyora chibvumirano ichi uye ukatadza kurapa kwakadaro mukati memazuva makumi matatu (30) kubva kuFoni Spy kukuzivisa kwauri nezvazvo; chero izvo, Nhare Spy dzinogona kumisa iyo Webhusaiti nekukasira sechikamu cheyakajairwa kuzadzikiswa kwebasa redu. Zvese zvigadzirwa zvechibvumirano ichi izvo nemasikirwo azvo zvinofanirwa kurarama zvichimiswa zvichapona pakumiswa, kusanganisira, pasina muganho, muridzi zvinopihwa, waranti disclaimer, kuregererwa uye kusakwana kwechisimba.
Kuzvidzivirira kweZvimbiso. Iyo Webhusaiti inopihwa "sezvairi". Nhare dzeSpy nevatengesi vayo uye vanopa marezinesi vanozviramba zvese zvivimbiso zverudzi rupi zvarwo, kuratidza kana kurevesa, kusanganisira, pasina muganho, zvivimbiso zvekutengesa, kugwinya kwechimwe chinangwa uye kusiri kutyora mutemo. Kana Nhare dzeSpy kana vatengesi vadzo uye marezinesi, inoita chero garandi kuti Webhusaiti ichave isina kukanganisa kana kuti kuwana kwayo kuchaenderera kana kusavhiringidzwa. Iwe unonzwisisa kuti unodhawunirodha kubva, kana neimwe nzira unowana zvemukati kana masevhisi kuburikidza, iyo Webhusaiti nekufunga kwako wega uye nenjodzi.
Kurambidzwa kweMhosva. Pasina chiitiko Mafoni Spy, kana vanopa kana vanopa marezinesi, vanozobatwa nemhosva kune chero nyaya yechibvumirano ichi pasi pechibvumirano chero chipi, kuregeredza, mutoro wakasimba kana imwe dzidziso yepamutemo kana yakaenzana ye: (i) chero yakakosha, inoitika kana yakanganisa kukuvara. ; (ii) mutengo wekutenga kwezvinotsiva zvigadzirwa kana masevhisi; (iii) yekukanganisa kushandiswa kana kurasikirwa kana huori hwe data; kana (iv) yemari ipi neipi inodarika fizi yaunobhadharwa newe kuFoni Spy pasi pechibvumirano ichi mukati menguva makumi maviri nemana chisati chaitika. Nhare dzeSpy dzinenge dzisina mutoro wekutadza kana kunonoka nekuda kwezvinhu zvinopfuura masimba avo. Zvambotaurwa hazvishande kusvika panorambidzwa nemutemo unoshanda.
Kuburitswa Kwemagumo uye Waranti. Iwe unomiririra uye waranti kuti (i) kushandisa kwako Webhusaiti kuve kunoenderana zvakanyanya nePhone Spy Chakavanzika Policy, nechibvumirano ichi uye nemitemo yese nemirau (kusanganisira pasina muganho chero mitemo yemuno kana zvirevo munyika yako, nyika, guta, kana imwe nzvimbo yehurumende, zvine chekuita nemafambisirwo epamhepo uye zvemukati zvinogamuchirwa, uye inosanganisira mitemo yese inoshanda maererano nekufambiswa kwehunyanzvi dhata rinotumirwa kubva kuUnited States kana nyika yaunogara) uye (ii) kushandisa kwako Webhusaiti hakukanganisa kana kushandisa zvisiri izvo kodzero dzepfuma yechero wechitatu bato.
Kuremekedza. Unobvuma kubhadharisa nekubata mafoni asina njodzi Spy, makondirakiti ayo, nevapi vayo marezinesi, nevatungamiriri vavo, maofficial, vashandi nevamiriri kubva nekurwisa chero zvirevo zvese nemari, kusanganisira mari yemagweta, zvichikonzerwa nekushandisa kwako Webhusaiti. , kusanganisira asi kwete kuganhurirwa nekutyora kwako Chibvumirano ichi.
Kusiyana. Chibvumirano ichi chinobata chibvumirano chose pakati pePhones Spy newe maererano nenyaya iri pano, uye vanogona kungogadziriswa nechinyorwa chakasainwa nemutungamiriri ane mvumo wePhone Spy, kana nekutumirwa nePhones Spy yadzokororwa vhezheni. Kunze kwekunge mutemo unoshanda, kana paine, unopa zvimwe, Chibvumirano ichi, chero mukana wekushandisa Webhusaiti inozotongwa nemitemo yeDelaware, USA, kusanganisa kupokana kwayo kwemitemo, nenzvimbo yakakodzera yemakakatanwa ese. inomuka kubva kana ine chekuita nechero ipi yakafanana ichave matunhu ehurumende nemubatanidzwa ari muDelaware, Delaware. Kunze kwezvikwereti zvekuregererwa kana kuenzana zvakaenzana kana zvirevo zvine chekuita nekwidzi kodzero (iyo inogona kuunzwa mudare chero ripi zvaro risina kutumirwa bond), gakava ripi zvaro rinomuka pasi pechibvumirano ichi rinozogadziriswa zvinoenderana neComprehensive Arbitration Rules ye Judicial Arbitration uye Mediation Service, Inc. ("JAMS") nevatongi vatatu vanogadzwa maererano neMitemo yakadaro. Arbitration ichaitika muDelaware, Delaware, mumutauro weChirungu uye danho rekumisikidza rinogona kumanikidzwa kudare chero ripi zvaro. Bato rinokunda mune chero chiito kana kuenderera kuzadzikisa Chibvumirano ichi chichava nekodzero yemitengo uye yemagweta. Kana chero chikamu chechibvumirano ichi chikabatwa chisina basa kana kusamanikidza, chikamu ichocho chichafungidzirwa kuratidza chinangwa chemapato, uye zvikamu zvasara zvicharamba zvichishanda zvizere. Kuregererwa nechero bato reimwe nguva kana mamiriro echibvumirano ichi kana chero kutyora kwaro, mune chero chiitiko chimwe chete, hakuzoregedze izwi kana mamiriro akadaro kana chero kutyora kunotevera kwacho. Unogona kugovera kodzero dzako pasi pechibvumirano ichi kune chero bato rinobvuma, uye richibvuma kusungwa nemitemo nemitemo yaro. Nhare Spy dzinogona kupa kodzero dzayo pasi pechibvumirano ichi pasina mamiriro. Chibvumirano ichi chinenge chichi sunga uye chichaita kuti mapato abatsirwe, avo vanovatsiva uye vanobvumidzwa kupihwa.
2 Comments · Siya Komendi
yako sei mazuva gumi mari yekudzoserwa garandi inoshanda kana ndikatenga, kuiisa uye woona kuti haisi kuita sezvazvinofanira kuita
Hongu kana nekuda kwechimwe chikonzero iwe uchigutsikana neapp yaunotenga, unofanirwa kubata rutsigiro uye ipapo rutsigiro rwuchadzorera iko kutenga. Rutsigiro rwekubata ruzivo rwunopihwa kwauri nekutenga.
Ndinovimba izvi zvinobatsira. Kana uine mimwe mibvunzo inzwa wakasununguka kubvunza.
Verenga yapfuura posvo:
How kusora paserura?
Unogona kusora nharembozha nerubatsiro rwe spy software. Pane peji redu rewebhu une yakafara ...